Dog Leash & Collar Factory - Shiinaha Dog Leash & Collar Manufacturers and Suppliers
Xayawaanku runtii waa wax la jecel yahay, martigeliyuhuna wuxuu jeclaan lahaa inuu qaato xayawaankan qurxoon marka uu dibadda u baxayo. Iyadoo aan eeygu xadhig iyo xargo toona lahayn, eeygu wuxuu tagi karaa meel kasta oo ay rabaan inay aadaan. Sidaa darteed, qoorta eyga iyo baalasha ayaa ah agabyada xayawaanka ku habboon, oo loo adeegsan karo tababarka, socodka, xakamaynta, aqoonsiga, moodada, hadiyadaha dhiirrigelinta, ama ujeeddooyin kale. Agabyadeeda la heli karo waa suunka nylon oo ku dayasho leh oo leh tolmo/satin/maro iyo suun. Suunka suufka ah ee aadka u jilicsan oo lagu tolayo suunka nylon ee ku dayashada leh dhibcaha milicsiga +maqaar PU. Mawduuca xariggu wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid waara, sidaa darteed ku -dayashada suunka nylon waa doorashada ugu habboon. Sidoo kale, agabyo kala duwan ayaa la dooran karaa sida suunka badbaadada, suunka la hagaajin karo, dhejiska caagga ah, jillaab carabineer iyo aalado kale oo la habeeyay. Ama haddii aad ku dari lahayd qalab kale oo aan shaqaynayn, taasi waa ok. Marka laga hadlayo astaanta, habab kala duwan ayaa la dooran karaa oo ay ku jiraan daabacaadda silkscreen, daabacaadda dib -u -dhigga, astaanta hoosta laga xarriiqay ama la tolay. Dhererkiisu wuxuu leeyahay cabbirka caadiga ah, laakiin haddii uu leeyahay cabbir la habeeyay, sidoo kale waa la soo dhaweynayaa. Haddii aad weli qabto wax kale oo shaki ah, naga tag oo aan noo oggolaanno inaan bixinno talooyinka xirfadeed. Jooji labalabeynta oo nala soo xiriir isla markiiba.
Eeyaha Leashes And Collars